Uncedo losapho: yintoni, indlela yokufaka kunye neemfuno zokuyicela | Ezezimali
Encarni Arcoya | | I ngxaki
Ukungaphangeli, ukungaqeshwa, uncedo losapho. Kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukuba le migaqo ibe semilebeni yakho nje ukuba uphulukane nomsebenzi, kuba ngamanye amaxesha ukufumana enye kunzima ukuyifumana. Kodwa, amaxesha amaninzi, la magama mabini ayaziwa kakhulu; akanjalo nowesithathu.
Ukuba ufuna ukwazi yintoni uncedo losapho, Zeziphi iimfuno ekufuneka kuhlangatyezwane nazo ukusicela, ukuba sikwenze njani kwaye kubandakanya ntoni, emva koko siza kuthetha ngako konke oku ukuze ukuqonde ngokugqibeleleyo.
1 Luyintoni uncedo losapho
1.1 Ngaba inkxaso yosapho ihlawulwa ngonaphakade?
2 Ungasifaka njani isicelo soncedo losapho kukudinwa kwemisebenzi
3 Ungasifaka kanjani isicelo soncedo ukuba awunalungelo lokungabikho kwemisebenzi
4 Kutheni ndingabizi i-euro ezingama-451?
Luyintoni uncedo losapho
Ngokubanzi, "uncedo losapho" yintlawulo emalunga nama-euro angama-451,92 ngenyanga enikezelwa kubantu abangasebenziyo abanoxanduva losapho kwaye ngubani, kuba bengenamsebenzi, kwaye bekwaphelile isibonelelo ngenxa yentswela-ngqesho, okanye abakwazi ukuqokelela, abanakho ukuhlangabezana neenkcitho abanazo.
Nangona kunjalo, into eyaziwa ngabantu abambalwa kukuba, ngoncedo losapho, kukho iindidi ezimbini zenkxaso, ezahlukileyo kwezinye.
Uncedo oluqhelekileyo. Malunga noncediso-mali oluqokelelwa emva kokuba uncedo lokungaphangeli luphelile. Nangona kunjalo, abayiniki wonke umntu, kodwa kufuneka kubekho ukusilela kwengeniso ukongeza kubukho boxanduva losapho.
Uncedo oluqhelekileyo. Ikwayinkxaso mali kodwa, ngokungafaniyo neyangaphambili, ihlawuliswa xa isibonelelo sokungaphangeli singenakufikelelwa. Ngoku, ukuze yamkelwe, kufuneka okungenani ube neentsuku ezingama-90 zomrhumo, ukongeza kwiirhafu zosapho.
Njengoko ubona, zombini ziyafana, kodwa iimfuno ngokwazo zahluke ngokupheleleyo.
Ngaba inkxaso yosapho ihlawulwa ngonaphakade?
Hayi, inkxaso yosapho ine "umhla wokuphelelwa." Isizathu sokuqala esinokubangela ukuba olu ncedo lurhoxiswe kungenxa yokuba ikhontrakthi yengqesho isayinwe nomsebenzi. Ngokusilela ekufezekiseni enye yeemfuno, oko kukuthi kukuswela umvuzo, uncedo luya kurhoxiswa ngokuzenzekelayo. Ngoku, oko akuthethi ukuba ayinakuphinda yenziwe, nangona kunjalo, yonke into iya kuxhomekeka kwimeko nganye.
Ngokubanzi, uncedo luqokelelwa kuphela iinyanga ezili-18. Oku kuyahlaziywa ukusuka kwiinyanga ezintandathu ukuya kwezintandathu. Kodwa kukho iimeko apho kuhlala ixesha elide. Umzekelo:
Ukungasebenzi phantsi kweminyaka engama-45 ubudala kunye nesibonelelo sokungaphangeli (kodwa uyifumene ubuncinci iinyanga ezi-6). Baza kuba nelungelo lokufumana iinyanga ezingama-24 zoncedo losapho.
Abantu abangaphangeliyo ngaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala benenzuzo yokungasebenzi (kodwa bayifumene ubuncinci iinyanga ezi-4). Iinyanga ezingama-24 zoncedo.
Abantu abangaphangeliyo ngaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala benenzuzo yokungasebenzi (kodwa bayifumene ubuncinci iinyanga ezi-6). Banokunyusa ixesha ukuya kuthi ga kwiinyanga ezingama-30 ubuninzi.
Ungasifaka njani isicelo soncedo losapho kukudinwa kwemisebenzi
Ukuba uphelelwe yintswela-ngqesho kwaye awukafumani msebenzi, unako Faka isicelo soncedo losapho ekudinweni kwesibonelelo sokungaphangeli. Ngoku, kuya kufuneka uhlangane nothotho lweemfuno ezi:
Hlala ungasebenzi kwaye ubhalise njengomntu ofuna umsebenzi.
Yima inyanga. Ibizwa ngokuba "yinyanga yokulinda", phakathi kokuphela kwentswela-ngqesho kwaye kucelwa uncedo losapho, ukubona ukuba uyawufumana na umsebenzi.
Ukuba neerhafu zosapho. Ngokuxhomekeka kusapho kuyaqondakala ukuba bangabantwana abangaphantsi kweminyaka engama-26 ubudala, kodwa nomlingane (ukuba oku kuxhomekeke kwezoqoqosho komnye) okanye abantwana abakhubazekileyo.
Ukungabi nengeniso ephezulu kune-75% yomvuzo omncinci wokusebenza.
Ukuba uhlangabezana neemfuno, kufuneka Faka isicelo soncedo losapho kwiintsuku ezili-15 zomsebenzi emva kokugqiba inyanga yokulinda. Ukwenza oku, kuya kufuneka uye kwi-SEPE (okanye uyenze kwi-intanethi) kwaye ulinde ukuba baphendule. Kuya kufuneka ubenayo i-DNI, zombini eyakho kunye nencwadi yosapho kunye ne-ID yeqabane; uxwebhu lwebhanki apho kuvela khona inombolo ye-akhawunti; nobungqina bengeniso.
Ungasifaka kanjani isicelo soncedo ukuba awunalungelo lokungabikho kwemisebenzi
Baninzi abantu abathi, xa ikhontrakthi yengqesho iphela, bengenalo ilungelo lokungaphangeli, kuba abanazo iintsuku ezingama-360 zokufaka igalelo. Xa oko kusenzeka, kwaye zonke iimfuno esele sizikhankanyile ngaphambili zifezekisiwe (abaxhomekeke kusapho, bengenayo ngaphezulu kwe-75% ye-SMI yengeniso kwaye bengasebenzi), unokucela uncedo losapho.
Ngoku, amaxesha okuyiqokelela ohluke kakhulu.
Ukuba wenze igalelo kuphela kwiinyanga ezi-3 ukuya kwezi-4 ukuya kwezi-5, kwaye unabantu abaxhomekeke kusapho, uyakuyiqokelela inkxaso-mali kuphela iinyanga eziyi-3-4-5, akusekho.
Ukuba wenze igalelo elingaphezulu kwe-6 kodwa ngaphantsi kweenyanga ezili-12, inkxaso-mali iya kuba ziinyanga ezi-6 ukuba awunabo abantu abaxhomekeke kuwe kwiintsapho, okanye ezingama-21 ukuba kunjalo.
Logama nje unegalelo ngaphezulu kweenyanga ezili-12, unokucela isibonelelo sokungaphangeli.
Kutheni ndingabizi i-euro ezingama-451?
Ngaphandle kwento yokuba, njengoko besikuxelele, uncedo losapho ngama-451 eeuros, kukho iimeko ezininzi apho abantu bengabizi mali, kwaye babiza i-euro ezingama-60, i-120, i-225 ye-euro ... Kutheni le nto isenzeka?
Ngokwenene Ayikuko ukuba babephazamile kwiSEPE, kodwa ukuba kukho "ushicilelo oluncinci" ekungekho mntu ukwazisayo, kwaye yiyo le nto yenza ukuba uncedo lwakho lube lincinci nangona uneentlawulo zosapho.
Kwenzeka ntoni ukuba, ukusuka ngo-2021, ukubala uncedo losapho, isivumelwano sokugqibela osisayinileyo sithathelwa ingqalelo. Ukuba sisivumelwano sexeshana okanye seyure, uMbuso akahlawuli i-100%, njengoko wawusenza ngaphambili, kodwa endaweni yoko wenza umlinganiso ngokweeyure ezisetyenzisiweyo.
Ukuba usebenza isiqingatha sosuku lokusebenza, ufumana isiqingatha sesibonelelo. Ukuba usebenza iiyure ezimbalwa, ufumana uncedo oluncinci. Elula njengaleyo. Ngaphambi koko, lonke uncedo beluhlawulwa ukuba zonke iimeko zifezekisiwe; ngaphandle kwesivumelwano sakho sokugqibela.
Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuba ibe yimpazamo, kungcono wenze idinga lokujongana ubuso ngobuso kwiofisi ye-SEPE kwaye ubonise elakho ityala. Kuba nabo bayazenza iimpazamo ngamanye amaxesha.
Ngaba uncedo losapho lucacile kuwe? Ngaba unawo nawaphi na amathandabuzo? Sitshele kwaye siza kuzama ukukunceda ukuyisombulula. Olunye ukhetho onokuthi uluthathe kukufuna ingcebiso kuba, ngaloo ndlela, ungabeka imeko yakho kwaye ufumane isisombululo esifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » I ngxaki » Uncedo oluqhelekileyo